Alakamisy Febroary 25, 2010 Asabotsy, Jona 27, 2015 Scott Hardigree
Vao haingana aho no nitondra ny zanako vavy 9 taona Justice, mpivarotra mpivarotra fitafiana ho an'ny ankizy. Hatrany am-piandohana dia daroka ahy ny mpitantana, tao anatin'ny elanelam-potoana 5 minitra, miaraka amin'ny tolo-kevitry ny vokatra sy ny fampiroboroboana. Nitohy nandritra ny 30 minitra izany mandra-pahatonga ahy noterena hianatra azy momba ny fahitan'ny mpanjifa sy ny tiany.
Ny programa mailaka ratsy dia mitovy amin'ny olona mpivarotra tsy mahomby. Raha tokony hamaky ny tsy mahaliana amin'ny endrik'ireo mpanjifanao ianao dia tsapao ny fiatraikany ratsy amin'ny varotra, na amiko, henoy ny hamafin'ny tenin'izy ireo; mailaka marketing dia afaka milaza aminao saika ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny mpanjifanao sy manampy anao hivarotra bebe kokoa.
Mihoatra ny “Salama FNAME”
Ny fahitana takiana mba hampahomby kokoa ny programa mailakao dia efa eo amin'ny tendron'ny rantsan-tànanao ary tsy lafo izany. Tonga aminao amin'ny endrika data. Tsy midika hoe misokatra sy tsindrio angon-drakitra aho, na dia hilaza zavatra betsaka aminao aza izany, miresaka momba ny angon-drakitra ahafahanao manokana ny traikefa ho an'ny mpanjifanao tsirairay aho.
Azo antoka, ny fiarahabana manokana dia matetika no raisina tsara fa araka ny nolazaiko tao amin'ny Chief Marketer farany teo lahatsoratra, ny fampielezan-kevitry ny Andron'ny Mpifankatia niavaka tamin'ity taona ity dia ireo izay nampiasa tahirin-kevitra lalindalina kokoa, toy ny tantaram-pividianana sy mombamomba ny mpanjifa, mba hahatonga ny tolotra omeny ho manokana kokoa ary noho izany misy ifandraisany kokoa. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny mpivarotra antsinjarany aho fa ny orinasam-panompoana koa dia manana tahirin-kevitra mora azo hanarahana (na haminavina mihitsy aza) ny fikasan'ny mpanjifany ary koa hahafantatra ireo vintana mivarotra sy mivarotra.
Inona no tokony hiarahanao miasa?
Ireo loharanon'ny angona azo ampiasaina dia toa tsy misy farany, saingy ireto misy sokajy vitsivitsy sy ohatra manokana:
Tantarany: Alao an-tsaina hoe manana maso misahana ny fitsangatsanganana ianao ary izaho no manana vinavina 65 y / o, mieritreritra ve ianao fa hamaly tsara kokoa ny tolotra iray izay manome taratra ireo toerana zokiolona malaza indrindra? Alao an-tsaina izao fa ireo sary tao amin'ilay tolotra dia ireo an'ny fandresen-dahatra volo volafotsy. Sa angamba any amoron'ny morontsiraka andrefana aho ary ny fandaharam-pianaranao dia fandaharam-potoana amin'ny 1 ora atsinanana atsinanana, mety hitandrina ny sezako ve aho raha mamaky ny 11 ora alina ny mailaka?
Tantaran'ny fividianana: Raha nividy fanomezana aho tamin'ny daty androany na manodidina, roa taona misesy, mety te-hividy hafa indray ve aho amin'ity taona ity? Ahoana raha nifanaraka tamin'ny fividianako ny mpividy fanomezana hafa ny tolo-kevitra vaovao? Mifanohitra amin'izany, ahoana raha efa nividy ny vokatrao voalohany aho, mieritreritra ve ianao fa te handre momba ny vola azoko notehirizina, raha mba niandry aho? Raha tokony ho izany, tsy aleoko ve hahafantatra momba ny fanoloran-tenanao faharoa?
Activity: Angamba efa naka taratasy fotsy telo nisesy tao anatin'ny 30 andro aho, saingy mbola tsy nividy aho, mety ve ny manasa ahy hiresaka momba ny zavatra ilaiko manokana? Sa mety tsy namaly ny tolotra nataonao tato ho ato aho, tonga lafatra ve aho amin'ny fanolorana fanomezana na fanadihadiana momba ny fahafaham-po?
safidinao: Alao an-tsaina hoe manana vokatra 10 samihafa ianao fa mpivarotra ihany aho izay tsy liana afa-tsy amin'ny vokatra 1-5. Tsy tokony hatao anaty segondra ve aho miaraka amin'ireo mpivarotra hafa? Ahoana raha mpampiasa mivantana aho fa tsy te hahazo fampahalalana momba ny fanabeazana fotsiny, mifanohitra amin'ny fampiroboroboana, dia azo inoana kokoa fa hijanona ho mpankafy sy hizara ny mombamomba anao aho raha izay tena tadiaviko ihany no azoko.
Mora sy tsy lafo ny fanatanterahana
Gaga foana aho rehefa nilaza ny mpivarotra SMB fa ho an'ny zazalahy lehibe ihany ny fampiasana angona amin'ity sehatra ity. Mety ho marina izany tamin'ny taona lasa, fa androany kosa ny ESP izay mendrika ny sira dia mifangaro mora foana amin'ny vahaolana CRM na E-commerce sy tranokalao. Analytics. Ny hany ataonao dia ny mampifangaro azy ary manandramana azy indrindra.
Tags: Activitymailakahetsika emailpersonalization mailakapreferences mailakamombamomba ny mailakafividianana mailakatantara mividy
Mar 19, 2010 ao amin'ny 1: PM PM
Tsia, tsy mora sy mora ny mampifandray ny fividianana mpanjifa sns amin'ny programa marketing mailaka. Saika ny ESP misahana ny tena manokana dia tsy manome na dia kely aza ny fampidirana. Andraikitry ny app POS na ny app-nao an-tserasera foana ny mampiditra sy manosika ny mombamomba ny “segmentation” mifandraika amin'ny fifandraisana amin'ny ESP.
Ny SMB dia maniry zavatra tsotra sy miantoka ny tenany.